दुई दिन लगातार घटेको बजार सामान्य अंकले बढ्यो, साढे ५ अर्बको शेयर कारोबार
वैशाख ७, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिनदेखि घटेको बजार मंगलवार सामान्य अंकले बढेको छ ।
यो दिन निकै उतारचढाबका बीच बजार २ दशमलव ६८ अंक अर्थात् शून्य दशमलव १० प्रतिशत बढेर २ हजार ६६४ दशमलव ६१ विन्दुमा बन्द भएको हो । सोमवार ३७ दशमलव ५८ अंक घटेर २ हजार ६६१ दशमलव ९३ विन्दुमा बन्द भएको बजार मंगलवार २ हजार ६७३ दशमलव २४ विन्दुदेखि खुलेको थियो ।
यो दिन बजार २ हजार ६८४ विन्दुसम्म पुगेको थियो भने २ हजार ६४८ दशमलव ८६ विन्दुसम्म झरेको थियो ।
मंगलवार सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि शून्य दशमलव १० प्रतिशतनै बढेको छ । शून्य दशमलव ५० अंकले बढेर सेन्सेटिभ इन्डेक्स ४७९ दशमलव ६० विन्दुमा पुगेको हो ।
यसदिन कारोबार रकम भने अघिल्लो कारोबार दिनभन्दा कम भएको छ । सोमवार रू. ६ अर्ब ७६ करोड ६८ लाख १ हजार बराबरको १ करोड ४२ लाख ७६८ कित्ता शेयर कारोबार भएकोमा मंगलवार रू. ५ अर्ब ५३ करोड ८६ लाख १७ हजार बराबरको १ करोड २३ लाख ६९ हजार ५०१ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । यो कारोबार २१६ ओटा कम्पनीको ६५ हजार ७९३ पटकको व्यापारमा भएको हो ।
सोमवारदेखि सर्वाधिक रकमको हिस्सा ओगटेको नागरिक लगानी कोषले मंगलवार पनि निरन्तरता पाएको छ । नागरिक लगानीकोषको रू. २१ करोड ४२ लाख ८९ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४१ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ३ हजार ९५३ कायम भएको छ ।
मंगलवारको बजारबाट विकास बैंक र जलविद्युत समूहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् । यो दिन विकास बैंकको परिसूचक सर्वाधिक १ दशमलव ६८ प्रतिशत र जलविद्युतको दोस्रोमा १ दशमलव २४ प्रतिशत परिसूचक बढेको हो ।
त्यस्तै यो दिन व्यापारिक समूहको शून्य दशमलव ९५ प्रतिशत, होटल्स तथा पर्यटन समूहको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत, वित्तको शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव ११ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव २२ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव १२ प्रतिशत र जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।
यो दिन लगानी समूहको परिसूचक सर्वाधिक १ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत घटेको छ । लगानी समूहसँगै बैंकिङ्ग समूहको शून्य दशमलव शून्य ७ प्रतिशत, निर्जिवन बीमा समूहको शून्य दशमलव १८ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव २९ प्रतिशतले परिसूचक घटेको छ ।
मंगलवार युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर र महिला लघुवित्तको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ भने ज्योति लाईफको ९ दशमलव ९६ प्रतिशत र हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीको ९ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसदिन युनाइटेड मोदी हाइड्रोको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १९ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २०९ कायम भएको छ भने महिला लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. १४६ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ६०६ कायम भएको छ । त्यस्तै ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता रू. ६८ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ७५१ र हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ३३ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३६८ पुगेको छ ।
मंगलवार समृद्धि फाइनान्स, ओरियण्टल होटल्स र छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य २ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । समृद्धि फाइनान्सको २ दशमलव ४७ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. ६ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू.२३७, ओरियण्टल होटल्सको २ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. १० ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ४४० र छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको २ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता रू. ६ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. २८९ कायम भएको छ ।
गत चैत १७ गतेदेखि निरन्तर बढेको बजार आइतवार र सोमवार दोहोरो उच्च अंकले घटेको हो । गत बिहीवार नेप्सेले हालसम्मकै उच्च २ हजार ७३५ दशमलव ४६ विन्दु कायम गरेको थियो । यो दुई दिनमा बजार विन्दु ७० दशमलव ८५ अंक घटेको छ ।
बजार निरन्तर बढेकाले दुई दिन नाफा बुक गर्नेहरु सक्रिय हुँदा करेक्सन भएको जानकार लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । बजारले अझै गति लिने हुँदा बुधवारदेखि बढ्न सक्ने सम्भावनालाई पनि जानकार लगानीकर्ताहरुले औंल्याएका छन् ।
०.४७ % घटेको बजारमा ८ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि [२०७८ बैशाख, २३]
हालसम्मकै उच्च विन्दुमा खानीखोला हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य, प्रतिकित्ता रू. १६५ [२०७८ बैशाख, २३]
२६२७.१९ विन्दुमा नेप्से परिसूचक, ४ अर्ब ३३ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार (२ बजेको अपडेट)[२०७८ बैशाख, २३]
दोस्रो घण्टामा ०.४५% ले घट्यो नेप्से, ६ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरले वृद्धि (१ बजेको अपडेट)[२०७८ बैशाख, २३]